नयाँ सरकारको काम र नीतिको आधारमा समर्थन र विरोध दुबै रहनेः माधवकुमार नेपाल
जेठ २४ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ सरकारप्रति आफ्नो पार्टीको पूर्णसमर्थन वा पूर्ण विरोधको नीति नरहने बताएका छन् । समसामयिक राजनीतिक विषययमा आज(बुधबार) प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद ...
महरा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री र जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री
जेठ २४ । नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले सरकारको नेतृत्व गर्नुे भएका छन् । माओवादी केन्द्रको आज(बुधबार) बसेको हेडक्वार्टरको बैठकले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा महरालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र ...
देउवाको शपथ आज, केहि मन्त्रीले पनि शपथ लिने
जेठ २४ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अाज पद तथा गोपनियताको सपथ लिंदैछन् । करिब पौने दुईबजे राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री देउवाले सपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आज नै पदभार ग्रहण ...
प्रधानमन्त्रीसँग कुनै ठोस कार्यक्रम छैन, किन बने त प्रधानमन्त्री ?
तपाईका प्राथमिकता के हुन् ? – प्राथमिकता तीन तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हो । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन नजिकै आएकाले त्यसलाई सम्पन्न गराउने मेरो पहिलो लक्ष्य हो । ...
देउवालाई चीनको बधाई
जेठ २४ । नेपाली काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा चीनले बधाई दिएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ मंगलबार साँझ देउवाको निजी निवास ...
बाबुराम भट्टराई भन्छन् देउवाको जीत भयो
जेठ २४ । शेरबहादु देउवा तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसलाई तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चा ९नेकपा माओवादी० का तर्फबाट बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २०५२ माघ २२ गते ४० बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यतिबेला ती ...
एमाले नेता यसकारण दङ्गः शेरबहादुर भए हुन् बामदेबलाई मरिगए हुन्न !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली चोटिला लाग्छन् । उनी राजनीतिका प्रसंगलाई अनेक उपमा दिएर बोल्छन् र, धेरैले चाखपूर्वख सुन्छन् । त्यसैगरी बोलेका थिए आलीले यसपाली । उनले ...
४० औँ प्रधानमन्त्री बने देउवा, यस्तो छ उनको राजनीतिक ‘फ्लास ब्याक’
जेठ २३ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । आज सोमबार भएको संसद बैठकसँगै संसदमा ३८८ मत ल्याएर उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनको विपक्षमा नेकपा एमालेको ...
देउवाले यसकारण हाने चौका, समकालिनले किन पाएनन् मौका !
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । अत्यन्त सुविधाजनक मतसहित देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यसअघि ३ पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत देउवाका लागि यति सहज वातावरण थिएन । ...
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली जनता खुसी हुनु पर्ने कुनै कारण छैन (भिडियोअन्तर्वार्ता)
–अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक सरकार बदलिनु, नयाँ बन्नु, पुरानो भत्किने घटनालाई संसदीय राजनीतिमा सामान्य घटनाको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । नयाँ बन्न लागेका शेरबहादुर देउवाको इतिहास पनि जनता धेरै खुशी र दुःखी हुनुपर्ने ...
प्रचण्डलाई धन्यवाद दिए गच्छदारले
जेठ २३ –लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । उनले प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्यको युगको प्रारम्भ गरेको बताए । नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता ...
राजपा र फोरमसँग कांग्रेस र माओवादीको तीनबुँदे सहमति,
जेठ २३ –सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग तीनबुँदे सहमति गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीले राजपा र फोरम नेपालसँग गरेको सहमतिको विषय र बुँदा ...
राष्ट्रियता हामीलाई सिकाउनुपर्दैन भन्दै ओलीलाई जवाफ दिए देउवाले
पाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियताको पाठ नपढाउन नेकपा एमालेलाई सुझाव दिएका छन् ।व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । “राष्ट्रियताको कुरा आजकल धेरै उठेको छ । हाम्रा आदर्श नै ...
ओलीको देउवालाई प्रश्न–मतपत्र च्यातियो, तपाईँको धारणा के छ ?
जेठ २३ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण विषयमा आजकल कांग्रेस बोल्न छाडेको बताएका छन् ।संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । “भरतपुरमा मतपत्र च्यातियो माननीयज्यु, तपाइँले के भन्नुहुन्छ ? ...
चुनावमा कसलाई हराउन नपाइने हो ? –केपी ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तपक्षले बल प्रयोग गरेर प्रायोजित ढंगले काम गरेको बताएका छन् ।व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । “एक चौथाइ ...
दाजु भाई वडाध्यक्षका उम्मेदवार
जेठ २३ । दोस्रो चरणमा आगामी असार १४ गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा गुल्मीमा एकै परिवारका दुई दाजुभाइ वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । मुसिकोट नगरपालिका–४ अन्तर्गत बडागाउँका यमबहादुर खत्री ...
४० औं प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउवाका यी हुन् सारथी
जेठ २३ । ४० औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने पक्का भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सानो संख्यामा छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेकाछन् । देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सपथ लिँदा आफ्ना समर्थनमा ...
आज ११ बजे देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुँदै, तीन दल संसद सुचारु गर्न सहमत
जेठ २३ । प्रमुख तीन दल अाज देखि व्यवस्थापिका–संसद बैठक सुचारु गर्न सहमत भएका छन् । साँझ सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति ...
जेठ २२ । नेपाली काँग्रेसका तीन नेता र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज(सोमबार) ओली निवास बालकोटमा भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएको छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनः सञ्चालन ...
तीन दलको बैठक जारी, ओली गएनन्
जेठ २२ संसद् सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुख र तीन दलको बैठक बसिरहेको छ । सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा जारी बैठकमा मंगलबारको संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल भइरहेको छ । नेकपा ...